Nagu Saabsan – Somali
In aanu noqonno xarunta loogu ixtiraamka badan yahay geeska Afrika ee bixisa adeegyada hoggaaaminta, dariiq xarriiqashada (strategy) iyo nidaamyada xisaabaadka/maaliyadda.
Inaanu kor u qaadno awoodda ay ganacsiyada, ururrada iyo shakhsiyaadka ee dhanka hoggaaminta, dariiq xarriiqashada iyo nidaamyada xisaabeed/maaliyadeed annaga oo adeegsanayna habab horumarineed oo la tijaabiyay iyo saamayn.
Waxaanu Aaminsanahay(Core Value)
Waxa aanu adeegyada u gudbinaa hab masuuliyadi ku jirto annaga oo daneeyayaashadana kula dhaqanna wanaag.
Waxa aanu macaamiishayada ugu adeegnaa hab cad iyo run sheegis shaqo kasta oo ay nooga baahdaan annaga oo u ilaalina sirahooda ganacsi iyo ku qof ahaaneedba. .
Mar walba waxa aannu ku gudo jirnaa habkii aannu adeegyo cusub ugu soo kordhin lahayn macaamiishayada sharafta leh.
Waxa aannu nahay koox aqoon iyo waayo aragnimo leh haddana is dhul-dhigta.
Waxa astaan noo ah in aannu isku duubni dhexdayada ah ku shaqayno, macaamiishayadana kula shaqayno.
Waxa aanu qabannaa adeegyo aan suure gal ula muuqan cid walba!.
Sida Aan u Bilaabanay
Ganacsigan waxa la bilaabay dabayaaqadii December 2015-kii iyada oo ujeeddadu ahayd in aannu ka shaqayno dhanka xisaabaadka oo kali ah. Waxa aasaasay ganacsigan laba nin oo midkood ahaa qof maskax furan oo markaa jaamacadda soo dhameeyay magaciisuna yahay Cali; iyo Cabdalla oo in kaban 10 sanno ku soo jiray maamulka sare ee ganacsiyada, xisaabaadka iyo la talinta.
Caqabado aanu kala kulannay nidaamyadii xisaabeed ee casriga ahaa ee aannu samaynay, talooyinkii aanu ka soo jeedinay hanti-dhowryadii aanu fulinay iyo tababarradii maamulka khuseeyay waxa aannu isku daynay in aannu fahanno waxa keenaya cilladahaasi.
Fikir iyo xog ururin farabadan ka dib waxa aannu ogaannay in inta badan hoggaanka ganacsiyadu aanay lahayn xirfaddii looga baahnaa dhanka maamulka si loo kobciyo ganacsiyada, waxa aanu xaqiiqsannay in aanay jirin dariiq cad oo qoran oo ay ganacsiyadu u qorshaystaan wax qabadyadooda mustaqbalka waxa sidoo kale noo caddaatay in wax cusub soo kordhintu ay ka yar tahay intii loo baahnaa.
Sidaa darteed, waxa aannu ganacsigii u rognay xarrun horumarisa hoggaaminta, dariiq xarriiqashada (istaraatiijiyadda), wax cusub soo kordhinta iyo nidaamyada casriga ah ee maaliyadeed si aanu u korinno awoodaha shaqsiga ah, ganacsiyeed ama urureed ee macaamiishayada, si ay culayska u saaraan ka gun gaadhista aragtidooda fog.